မကြာမီထွက်ရှိတော့မယ့် Motorola ရဲ့ Smartphone အသစ်များ! – AsiaApps
မကြာမီထွက်ရှိတော့မယ့် Motorola ရဲ့ Smartphone အသစ်များ!
January 17, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on မကြာမီထွက်ရှိတော့မယ့် Motorola ရဲ့ Smartphone အသစ်များ!
Motorola (Motorola) ရဲ့မကြာခင်ထွက်ရှိမယ့် Smartphone အသစ်တွေကတော့ X-family ထဲကဖြစ်တဲ့ Moto X5 နဲ့ G-family ထဲက G6, G6 Plus နဲ့ G6 Play promo တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Moto X5 မထွက်ရှိခင်တုန်းက X-family မှာထွက်ရှိထားတဲ့ X4 ဟာဆိုရင်အရင်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ X series တွေနဲ့ မတူညီတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ပထမဉီးဆုံးအနေနဲ့ ကွဲပြားသွားတာကတော့ အမည်ပါ။ Moto X (2017) လို့အမည်မတွင်ပဲ X4 လို့အမည်တွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ Evan Blass ရဲ့ Twitter post ကနေတဆင့်သိရှိရတာပါ။ Evan Blass ဟာတော့ မှန်ကန်တဲ့ Tips လေးတွေပေးတဲ့ Mobile reporter တစ်ဉီးပဲဖြစ်ပါတယ်။
The Moto X5 is probably the strangest of them all, with its iPhone X-like notch and white software button at the bottom of the screen. Oh, and there’s no fingerprint sensor in sight anywhere. Anyway, the X5 is said to come witha5.9-inch 18:9 display with 2,160×1,080 resolution. It’s unclear how its notch will work with Android notifications.
Motorola ထွက်ရှိမယ့် Smartphone အသစ်တွေထဲမှာထူးခြားလွန်တဲ့ M-family ထဲက Moto X5 ဟာဆိုရင် Notch လေးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Notch ကတော့ iPhone X ရဲ့ ထိပ်လေးမှာပါဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ iPhone X မှာ Notch က ဖုန်းမျက်နှာပြင်ထိပ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် X5 အနေနဲ့ကတော့ ဘယ်နေရာမှာပါဝင်ပြီး Notification တွေပြသွားမလဲဆိုတာတော့ သေချာမသိရှိရသေးပါဘူး။ ပြီးတော့ Fingerprint လည်းမပါဝင်ပါဘူး။ Feature ပိုင်းအရဆိုရင် iPhone X နဲ့အနည်းငယ်ဆင်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ Moto X5 ဟာ ၅.၉ လက်မဖြစ်ပြီး 2,160 x 1,080 resolution ရှိပါတယ်။
The Moto G6 Plus, on the other hand, hasalarger 5.93″ display with the same resolution as its smaller sibling’s.
G-family နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Model ကတော့ G5s Plus ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ G-family မှာဒီနှစ်အတွင်း G6, G6 Plus နဲ့ G6 Play promo ဆိုပြီး model ၃ ခုတိုးလာမှာပါ။ G6 Plus ဟာဆိုရင် ၅.၉၃ လက်မ ရှိနေပြီး resoution အနေနဲ့ကတော့ သူ့မိသားစု (G-family) ရဲ့ အငယ်တွေနဲ့အတူတူပါပဲ။
ဘက်ထရီအပိုင်းကြည့်ရင်လည်း G6 မှာ ၃၀၀၀ mAh၊ G6 Plus မှာဆို ၃၂၀၀ mAh အထိရှိနေမှာပါ။ G6 play ကတော့ ၄၀၀၀ mAh ဘက်ထရီအထိရှိနေပြီး အားလုံးထဲမှာအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ Moto X5 မှာ Fingerprint မပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် မကြာခင်ထွက်ရှိမယ့် G6 model တွေမှာတော့ Fingerprint အကုန်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Motorola ထွက်ရှိမယ့် model အသစ်တွေကို ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နေ့ကနေ ၁၂ ရက်အထိကျင်းပမယ့် CES (သို့) ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် MWC မှာတွေ့မြင်ရမယ်လို့မျှော်မှန်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CES မှာမတွေ့လိုက်ရဘူးဆိုတော့ MWC မှာမြင်တွေ့နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ website ကလည်း ဖုန်းအသစ်တွေ ထွက်ရှိခါနီးအချိန်ကျရင် တိကျသတင်းတွေနဲ့ ပြန်လာမှာကြောင့် လက်မလွတ်ချင်ရင်တော့ မကြာခဏလာလည်ကြ ဖို့အကြုံပြုလိုက်ပါတယ်။
အရမ်းမိုက်တဲ့ wallpaper ဒီဇိုင်းလေးတွေ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ Wallpaper Maker- Make Monogram
မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Samsung Galaxy S6 ရဲ့ Oreo update!